भर परिवार ५ दशकदेखि व्यवसायिक फलफूल खेतीमा, वार्षिक आम्दानी १० लाख ! « News24 : Premium News Channel
भर परिवार ५ दशकदेखि व्यवसायिक फलफूल खेतीमा, वार्षिक आम्दानी १० लाख !
भैरहवा । रुपन्देहीको गैडहवास्थित एक परिवारले ५ दशकदेखि व्यवसायिक फलफूल खेतीलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । हजुर बुवादेखि नातीसम्मका तीनै पुस्ता दिनरात फलफूल उत्पादनमा व्यस्त छन् ।
उमेरले राजमन भर ७९ वर्ष पुगेपनि पुख्र्यौली पेसाप्रति जोस–जाँगर उस्तै छ । रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका–८, डोलहीका भर परिवारले ५० वर्ष भयो फलफूल खेती गर्न थालेको । ४ पुस्तादेखि उनीहरु यही पेसामा आवद्ध छन् ।
४ विघा आफ्नै र ११ विघा लिजमा लिएर खटिएर फलफूल खेती गर्दै आएका छन् । यसबाट उनीहरुले वार्षिक १० लाखसम्म आम्दानी गर्छन् । अहिले बारीमा लटरम्म आँप र कटहर फलेका छन् । यसको स्याहार–सुसार र विक्रीका लागि उनीहरुलाई भ्याइ–नभ्याइ छ ।
सात जनाको भर परिवारले पहिला आँप खेती मात्रै गरेपनि हाल लिची, बयर, कटहर, अम्बा, अमला र कागती खेती पनि गर्दै आएका छन् । उनीहरुले १३ विघामा आँप, १ विघामा लिची र अमला, १ विघामा अम्बा, कागती र कटहर खेती गर्दै आएका छन् । उनीहरुले आँपका मात्रै १५÷२० प्रजाति हुर्काएका छन् ।
सामान्य तरकारी र फलफूल खेतीमा नाममा सरकारी अनुदान लिने परम्परा बढे पनि भर परिवारले भने आफ्नै बलबुतामा फलफूल हुर्काइरहेका छन् । पुस्तौंदेखि फूलफूल खेती गर्दै आएका उनीहरुले अहिलेसम्म कहीकतैबाट अनुदान र अन्य सहयोग न पाएपनि पुख्र्यौली पेसालाई बढाउँदै लगेका छन् ।
तर, वन्यजन्तुले खाइदिने, चोरी हुने, सिंचाई र बजारीकरणको अभावले भने चिन्तित छन् । कृषि मन्त्रालयको अनुसार नेपालमा अहिले एक लाख २६ हजार नौ सय ३४ हेक्टरमा फलफूल खेती हुँदै आए पनि वर्षेनि अर्बौको फलफूल आयात हुँदै आएको छ ।
तसर्थ सरकारले फलफुल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको सरोकारवालाको सुझाव छ ।